Taliyaha Saldhiga Degmada Afgooye ayaa sheegay inay badbaadiyeen lix ruux oo saarneyd Diyaarada ayna badqabaan – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Saldhiga Degmada Afgooye ayaa sheegay inay badbaadiyeen lix ruux oo saarneyd Diyaarada ayna badqabaan
Saraakiisha Booliska Degmada Afgooye, ayaa ka hadlay Diyaarad xalay fiidkii ku soo dhacday deegaanka Carbiska ee Gobolka Shabeellaha hoose, Diyaaradaasi oo la sheegay inay u socotay ciidamada Amisom ee howlgalka Somaliya u jooga.
Inkastoo aanan si dhab ah loo cadeyn diyaarada waxa saarnaa, hadana waxaa la xaqiijiyay inay u socotay Diyaarada Ciidamada Amisom, ayna ku degi weyday Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho kolkii ay ka ciladoobeen lugaha oo ay u bixi waayeen.
Diyaarada oo muddo ku dhaw saacad xalay dul wareegaysay Magaalada Muqdisho, ayaa ugu dambeyn waxa ay ku dhacday inta u dhaxeysa Degmada Afgooye iyo deegaanka Carbiska.
Dhame Amiin Maxamed Cusmaan, Taliyaha Saldhiga Degmada Afgooye ayaa sheegay inay bad-baadiyeen lix ruux oo saarneyd Diyaarada ayna badqabaan dadkaasi, waxa ay u dhasheen dadkaasi dalka Masar.
Taliyaha ma uusan sheegin waxa ay siday Diyaarada, laakiin wuxuu sheegay goobta diyaarada ay ku dhacday haatan inay ku sugan yihiin ciidamada Dowladda Somaliya iyo kuwa Amisom oo ammaanka goobta adkeynaya.
Sidoo kale xalay markii diyaaradan ay soo dhacday ayaa goobta waxaa tagay Taliye ku xigeenka ciidamada Booliska Somaliya General Muqtaar Afrax oo kormeeray goobta diyaarada ay ku dhacday.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya diyaaradan inay siday saanad Militari oo loo waday ciidamada Amisom, laakiin wararkaasi lama xaqiijin karo.
C/laahi Goodax Barre marnaba diyaar uma nihiin in aan ka wada hadalno mooshinka kadhanka ah madaxweynaha
Tartan ciyaarta kubada cagta ah oo lagu xusayo maalinta calnka ayaa lagu qabtay koonfur afrika(Daawo Sawirada)